Xaqiiq: Maxaa ka run ah warbixinta ay QM ee hawada Somalia ? - Caasimada Online
Home Warar Xaqiiq: Maxaa ka run ah warbixinta ay QM ee hawada Somalia ?
Xaqiiq: Maxaa ka run ah warbixinta ay QM ee hawada Somalia ?
Muqdisho (Caasimada Online) – Sida aan wararkeena hore ku sheegnay Madaxweynaha Hay’adda QM u qaabilsan Maamulka Hawada Dr. Olmuyiwa Benard Aliu, ayaa sheegay in Hawada Somalia aan lagu wareejin doonin dowladaha Somalia dariska la ah.
QM ayaa sanadkii tagay bilowgiisa gorgortan la gashay dowladaha deriska la ah Somalia oo ay ugu horeeyan Kenya iyo Ethiopia.
Gorgortanka ayaa ahaa mid salka ku heysa dowladaha mudan inay maamusho Hawada Somalia, waxa ayna xaqiiqdu tahay in dowladaha Kenya iyo Ethiopia ay isku qabsadeen maamulida Hawada Somalia, iyadoo ay xusid mudan tahay in arrinta Hawada Somalia ay ku kala irdhooben labada dal.
Dowlada Kenya oo dooneysay in lagu wareejiyo Hawada Somalia ayaa QM u ballanqaaday inay dhameystiri doonto dhammaan qalabka lagu maamulo Hawada, isla markaana ay wakhti danbe la bixi doonto dhaqaalaha ka galay iibinta qalabka.
Dowlada Ethiopia ayaa iyana QM ka dalbatay in si rasmi ah maamulka Hawada Somalia loogu wareejiyo isla markaana laga maamulo magaalada Addis Ababa, waxa ayna Ethiopia dhankeeda ka balanqaaday in dhaqaalaha kasoo baxa Hawada Somalia 3 meelood 2 meel ku wareejin doonto QM, iyadoo saxiixday inay iibin doonto dhammaan qalabka ka dhiman maamulka Hawada.
Shir February 12, 2016 ka dhacay magaalada Nairobi ee Xarunta dalka Kenya oo ay ku dhamaayen xubno kala matalaaya labada Dowladood iyo QM ayaa kusoo dhamaaday fashil, kadib markii labada dal ay isku khilaafeen cida lagu wareejin doono Hadawada Somalia.
Xubnaha kala matalaaya Wasaarada khuseeya arrimaha duulimaadyada iyo Hawada ee Dowladaha Kenya iyo Ethiopia ayaa ku kala tagay shirka waxa uuna khilaafka ugu badan ahaa mid salka ku hayay Goobta iyo halka laga maamulaayo Hawada Somalia.
Shirkaasi ayaa waxaa dhanka QM u matalaayay ku-xigeenka Madaxa Maamulka Hawada iyo Xubno ka koobnaa Seddex oo ka socday Xafiiska Maamulka Hawada QM, waxaana suuroobi weyday in QM ay labada dal ku qanciso cida maamulka Hawada Somalia looga danbeyn doono.
Shirkaasi oo aan laga gaarin Ujeedkii laga lahaa isla markaana lagu kala booday ayaa waxa ay Wakiilada ka socday QM dib ugu laabteen Xaruntooda si Madaxda ugu sareysa QM go’aan uga gaaran muranka labada dal ee ka dhashay Hawada Somalia.
Wixii ka danbeeyay Bisha 9aad 2016, Madaxda ugu sareysa QM iyo Maamulka u qaabilsan Hawada Somalia ayaa isla go’aamiyay in la hakiyo qorshaha lagu wareejinaayo Hawada Somalia, iyadoo sabab looga dhigay Muranka ka dhex aloosan dowladaha deriska la ah Somalia oo isku qabsaday la wareegida Hawada Somalia.
Madaxweynaha Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Maamulka Hawada Dr. Olmuyiwa Benard Aliu, oo arrinta Hawada Somalia kala kulmaayay culeys dhanka DFS iyo Dowladaha dariska ayaa maamulka sare ee QM ka dalbaday in loo igmado ka warbixinta Hawada Somalia oo dhalisay muran Seddex geesood ah.
April 9, 2017, waxaa Madaxa Maamulka Hawada Somalia ee QM Dr. Olmuyiwa Benard Aliu fasax loo siiyay inuu ka hadli karo arrinta Hawada Somalia si DFS ee Somalia loogu muujiyo in QM ay wali gacanta ku heyso maamulka Hawada Somalia.
Waxyaabaha lagu amray Dr. Olmuyiwa Benard Aliu, ayaa waxaa kamid ahaa beeninta wararka la xiriira gorgortanka ay QM la gashay dowladaha deriska la ah Somalia ee ku aadan wareejinta Hawada Somalia.
April 11, 2017, Madaxweynaha Hay’adda QM u qaabilsan Maamulka Hawada Dr. Olmuyiwa Benard Aliu, ayaa shaaciyay inaanu jirin wararka sheegaya in in Hawada Soomaaliya lagu wareejinayo wadamada deriska.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka beeninta ah ee kasoo yeeray QM ayaa kusoo beegmaaya xili maalmihii u dambeeyey ay soo xoogeysanaysay hadal heynta qorshe la doonayo in maamulka Hawada Soomaaliya lagu wareejiyo Dowlado Shisheeye, halka qorshu uu markii hore ahaa in dowladda Somalia lagu wareejiyo, qalabkii howshaa fududeyn lahaana la keenay magaalada Muqdisho.